Indlela yokuphila enempilo isiyindlela yokwenza imfashini namhlanje, kepha uma umuntu omdala ekwazi ukulawula ukudla kwakhe siqu, izingane zixhomeke ngokuphelele ekuthandweni kwabazali bazo. Unganikeza ingane yakho ngamasheya anqunyiwe amavithamini nama-macronutrients? Bheka abakhiqizi abaqinisekisiwe bokudla kwezingane. Isibonelo, isitoreji se-mash "Izitidi Zogu lolwandle". Ukubuyekezwa kwemikhiqizo yalo mkhiqizo kwenza kube lula ukuqinisekisa ukuthi ingane izokhula, isebenze futhi ijabule.
Esikhukhuleni se-Pridonsky, izithelo zezithelo zama-apula zavela ngekhulu le-19, futhi ngo-1949 kwakhiwa isitifiketi somuthi wezithelo lapho. Kwakukhona izithelo eziningi, kodwa imakethe yayiziqhaqhazela, ngakho-ke kunqunywa ukwakha izakhiwo zokukhiqiza ukucubungula izithelo kumanzi we-apple juice. Futhi ngo-1997 isitshalo "Sady Pridonya" saqala umsebenzi wawo, okukhethekile ekusebenzeni ama-apula kanye nokukhiqiza amaju. Emkhakheni wezithelo zomuthi wezithelo futhi isitshalo sikhula i-apple, i-cherry kanye nemithi yeplamu. Indawo ephelele yamahektha ayi-8000 ikuvumela ukuba ungatshali nje kuphela ihlobo ehlobo, ekwindla nasebusika, kodwa futhi nemifino eyanele. Khona-ke izithelo ziya ekukhiqizeni ukudla kwezingane. Ngalokho, ububanzi buyanda. I-Puree "Ijedi Pridonia" ihlela uhlelo oluhle lokubunjwa kwalo kwemvelo, amanani entando yeningi nokunambitheka okucebile.
Namuhla, "iJardens Pridonya" iyinhlangano ehamba phambili eRussia yokulima nokucubungula izithelo nemifino. Ephothifoliyo yama brand izimpawu zokuthengisa ezinjenge "Golden Russia", "Gardens Pridonya", "Spelenok", "My" ne "World Juicy". Njalo ngonyaka ububanzi bemikhiqizo bugcwaliswa ngemikhiqizo emisha, ethandwa kakhulu ezweni lethu. Muva nje, ukukhiqizwa kwemifino - ingxube ehlukahlukene yemifino ne-beetroot evela eJardens of the Seashore kanye ne-carrot exotic evela ku-brand Zolotaya Rus - ifike emakethe. Eresiphi yale mikhiqizo, imifino kanye nezithelo zomkhiqizo wayo zasetshenziswa.
Le nkampani ikhula ngokuqhubekayo, futhi manje "iJustens Pridonya" ikhula izinto eziwusizo emapulazini ezifundeni zaseVolgograd, eSaratov, ePenza. Le nqubo ayisebenzisi izithasiselo zamakhemikhali, ngoba umgomo oyinhloko wenkampani ukuthola ukuthola ukudla okunempilo nokunomsoco. Ukudla kwezingane ezincane kufanele kuhluke, ngakho-ke asikwazi ukwenza ngaphandle kwezinhlobo zezithelo nemifino etholakalayo. Ngakho-ke, amazambane ahlambulukile "Izitayela Zelwandle". Ukubuyekezwa kwe-Apple "kwamukela inguqulo enhle kunazo zonke nangokwemvelo yamazambane ahlambulukile, kodwa ngokujwayelekile umugqa wonke uhambisana nezidingo zezingane kumavithamini namaminerali. Le nkampani izame ukusungula ucingo oluhle lwezobuchwepheshe ngenhloso yalo, kufaka phakathi ukukhiqizwa kwezolimo, ukucubungula nokudayiswa kwemikhiqizo eqedile. Ngokuba abakhiqizi bemikhiqizo yabo bakhethe isiqubulo - "Ikhwalithi lokuqala lokuqala."
Ngakho-ke, kucebile kanjani ukuhlanjululwa kwamanzi "Gardens of the Sea"? Umbiko wekhasimende wukuthi yi-puree yindlela enhle kakhulu yemikhiqizo yenkampani. Kubathengi abancane ama-juice amaningi kanye nama-pures avela izithelo nemifino banikezwa ngamafomethi okupakisha ahlukene. Ifomethi ethandwa kakhulu futhi ethandwa kakhulu - ama-0.2 amalitha, okusuke ngo-2015 akhululwe ngendlela entsha yokupakisha i-Tetra Pak Slim Leaf. Ukupakisha kwalolu hlobo kunamaphethelo ohlangothini, ngenxa yokuthi ibhokisi likhululekile ukubamba isandla. Lokhu kubaluleke kakhulu uma sikhumbula ukuthi abathengi abakhulu be-puree bangabantwana abancane. Kuyo yonke le minyaka, kuphela ukuthi umkhiqizo usekelwe ezinhlobonhlobo eziluhlaza zama-apula wemvelo ahlala engashintshi. Enhliziyweni yokukhiqiza ubuchwepheshe be-puree bokusula okubandayo, okukuvumela ukuthi ulondoloze ukunambitheka futhi uzuze zonke izithako.
Ake sidlule emgqeni
Ngakho-ke, yikuphi ukuhlanganiswa kwama-puree "Gardens of the Sea"? Amazwana wabathengi ayenayo ngokuqondene nomkhiqizo ngaphandle kwezinga elincane ngenxa yobubanzi bomugqa owethulwe. Uma ukhetha imikhiqizo kwiphakheji ye-tetra, owokuqala ukunikeza i-puree "Apple" ngamakitha angu-0,125. Izingane zingaphuza i-pure kusuka ezinyangeni ezingu-4. Ekubunjweni kwe-apple puree yemvelo ngaphandle kwe-sugar added. Ngendlela, imikhiqizo iyadingeka phakathi kwabantu abadala asezweni. Iqiniso liwukuthi i-apula puree yemvelo iyinxenye engcono yamafutha ekwebeni okuphansi kwekhalori. Ukunambitheka kuba kuphela okucebile futhi kukhanya.
Kusukela ezinyangeni ezingu-5 ungadla izingane ezihlanzekile "Apple-Apricot". Ivolumu iyafana, 0.125 amalitha. Ngaphezu kwe-apple i-puree i-apricot, kanye noshukela namanzi.
Ngaphandle kokushukela ku-puree "Apple-peach" enevolumu efanayo namabhasi aphansi. Ukunambitheka komkhiqizo kuyethenda.
Okulandelayo kuza amazambane aphethwe "Apple-pear-plum". Yonke imikhiqizo emithathu eyashiwo yilezi zakhiwo ezenziwe nge-puree. Axhunyiwe ngamanzi, futhi ushukela awusikho.
Awukwazi ukudla izithelo wedwa futhi kancane kancane unciphisa i-ration nemifino ene-"Yabloko-pumpkin" puree. I-pure puree ihlangene ngokuhambisana ne-apula, futhi ushukela akudingeki lapha, ngoba ithanga elivuthiwe ngokwayo lihle kakhulu.
Ngemuva kwelanga, ungafundisa ingane kanye izaqathe namazambane aphuziwe "Apple-isanqante". Kukhona futhi ushukela emkhiqizo, kodwa ubumnandi abuzange buthathwe.
Ingxenye ethile ye-exotic acid i-puree "Apple-cherry". Ingadliwa ngesigamu sonyaka, futhi ekwakheni ama-apula wemvelo nama cherry kanye namanzi.
Sasibala izinhlobonhlobo eziyinhloko zamazambane ahlambulukile kumaphakethe we-tetra, kodwa kusekhona uhlobo lokukhululwa lapho umntwana "Gardens of Pridonie" ahlanzekile khona. Amazwana avela kubathengi ahlukile, njengoba abanye bakholelwa ukuthi imikhiqizo engilazi igcinwa isikhathi eside, inambitheka emnandi kakhulu. Masihambe ngokusebenzisa i-assortment evezwe ezitolo. Ngakho, "Izingadi Zogu lolwandle". Ukubukezwa kwamakhasimende we-"pure Kabachok" kubeka indawo yokuqala ukunambitha. Ekubunjweni kukhona kuphela i-zucchini. Akukho ushukela. Umthamo wama-0.120 amalitha. Ukunambitheka kuyethenda, kepha kuqondile kumuntu omdala, njengoba kungekho sipayisi. Kodwa akekho abazali, kodwa izingane! Futhi labo abazobe benza imikhiqizo nge-zucchini ngenjabulo.
Ukunambitheka okungahambi hlangothi kubonakala nge-puree "Ukholifulawa". Ekubunjweni kweklabishi kuphela. Umkhiqizo unomsoco kakhulu, ngakho-ke uketshezi oluncane.
Izinhlobo eziningana zemikhiqizo ephinda efana nezifanekiselo ze-tetra. Le "Apple" ye-puree yama-0.120 amalitha, "izaqathe", "ithanga", "i-Apple-Peach", "i-Apple-pear-plum" ne-"Apple-apricot". Kodwa zikhona egumbini kanye nokuthanda kokuqala, isibonelo, i-puree "i-Apple-black currant." Lapha, ama-apula agayiwe nomusi we-blackcurrant. Futhi ku-puree "i-Apple-cherry" kukhona i-cherry juice.
Yini ochwepheshe abathi?
Futhi ochwepheshe bahlola kanjani ukudla kwezingane? Ngokuyinhloko, amazambane ahlambulukileyo "Gardens of Pridonie" athola ukubuyekezwa njengenye yempahla yeningi yentando yeningi emakethe yaseRussia. Ngokusho kwemiphumela yokuhlola, le nhlanganisela iqukethe amaningi kavithamini C kanye nensimbi. Kwezinye izimo, ukutholakala ushukela kubamba isithombe, ngoba ukunambitheka kuyaba mnandi futhi kungavamile. Ngokuvamile, ukubunjwa kwakumangalisa kakhulu ochwepheshe, ngoba inani levithamini C cishe lihambisana nendawo evamile yenyanga eneminyaka eyisithupha ubudala. I-iron ekubunjweni iphindwe kasikhombisa kunayo yonke i-apula, kodwa lokhu kuyokwanela ingxenye yesine yomkhuba wansuku zonke wengane.
Ekukhiqizeni awekho amakhemikhali kanye nezibulala-zinambuzane, futhi izinga le-nitrate liphansi kakhulu kunejwayelekile. Kodwa kukhona i-sucrose, engathandeki kokudla kwezingane. Ekufakelweni, umkhiqizo wathola izilinganiso ezihle kuphela, ngoba kuma-tetra packs okuqukethwe akuwohloki isikhathi eside.
Ekuhloleni ukuvumelana nokunambitheka, imibono yocwaningo yayihlukile. Oomama abaningi bahlolisisa ama-puree yemifino "Gardens of the Sea". Ukubuyekezwa komkhiqizo kusuka ku-cauliflower kunqamule ukungathathi hlangothi, ngoba ukunambitheka kubonakala sengathi "kungenalutho". Futhi, omama batjengisa ukuphazamiseka kwe-"Apple-Apricot" ehlanzekile, eyayibizwa ngokuthi i-sweet and starchy. Ukuvumelana kwalezi zinhlobonhlobo zemikhiqizo kwahlolwa njengamanzi amaningi, okungahambi kahle uma udla isiphuzo noma isiphuzo. Imibono ephikisanayo ibangela amazambane ahlambulukileyo "Izitayela Zogu lolwandle" "Kabachok". Amazwana ahluke ngoba abaningi nabo babheka njengamanzi amaningi, ngakho-ke, hhayi ukuxosha.
Ulwandle olomile kale: awukwazi ukulidla kuphela!
I-Hops-Suneli: ukwakheka kokuvuna okuthandayo
Ingabe glutamate sodium eyingozi noma cha? Amplifier ukunambitha glutamate sodium E621
I-Kalamata Olives: Ekuqaleni eGrisi
Kuhlelwe yesondlo zokuvimbela imishini
Indlela yokwenza okumnandi esifohlozelayo risotto multivarka e Redmond
OKUBI "Iodine-Active": ukubuyekezwa. "Iodine-Active": izinkomba, imiyalelo, umthamo, intengo
Ubuchopho kwesokunxele kufanele aphendule ngalokho? Kanjani ukuthuthukisa ubuchopho kwesokunxele?
Ifenisha for balcony kanye loggias: izinhlobo kanye nezici
Indlela ukususa hh uqhube phakade - igxathu negxathu Umhlahlandlela